Awoodda dhaqaale iyo tan milatari ee al-Shabaab oo hoos u dhacday
Ururka al-Shabaab waxaa sanooyinkii lasoo dhaafay wiiqmeen awooddooda milatari iyo tan dhaqaale, sida ay sheegayaan fallanqeeyeyaasha arrimaha amniga kuwaasoo ka faalloodaan arrimaha amniga Soomaaliya. Waxaa taasi u sii dheer ururka iyadoo dadweynaha ku dhaqan tuulooyinka faro-ku-tiriska ah ee ururku weli ka arrimiyo ay kasoo horjeedaan xukunka gurracan ee ururka iyadoo dagaallada ay dadweynaha ku qaaddaan ururka ay sare u kaceen.
Sidoo kale, ururka waxaa laga saaray dhulal badan oo uu hadda ka hor ka talin jiray maaddaama Ciidammada Xoogga Dalka iyo kuwa Beesha Caalamka ay si joogta ah u duqeynayaan goobaha ururku kusoo haray. Toddobaadkii lasoo dhaafay, Ciidammada Xoogga Dalka waxay xoreeyeen tuulada Buundada Araare ee Gobalka Jubbada Hoose kaddib markii ay howlgallo qorsheysan Ciidammada Xoogga Dalka ka fuliyeen deegaannada Jubbooyinka. Ciidammada ma aysan la kulmin wax dagaal ah oo ka socda dhanka al-Shabaab.
Waxaa sidoo kale la qiyaasayaa in dagaalladii sannadkaan gudahiisa ay Ciidammada Xoogga Dalka ku qaadeen ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab ay ku dhinteen ugu yaraan 200 oo ka tirsanaa ururkaas.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab wuxuu sidoo kale lumiyay taageerradii uu ka helayay dadweynaha, waxaana in badan lasoo tabiyay in dagaallada dhex mara dadweynaha iyo maleeshiyada al-Shabaab ay aad u bateen. Ururka wuxuu da’ yarta iyo odayaasha ku khasbaa inay ka mid noqdaan dagaal-yahannadiisa si ay u buuxiyaan tirada maleeshiyada ururka kuwaasoo si xad-dhaaf ah loo laayay. Wuxuu da’ yarta ka afduubaa dugsiyada taasoo xaqiijineyso dhibaatooyinka soo wajaheen ururka maaddaama uu gaarayo go’aannada adag ee noocaan ah.